Local, Foreign Firms Entitled to Dispute Settlement: Myanmar Competition Commission | Myanmar Business Today
Home Business Local Local, Foreign Firms Entitled to Dispute Settlement: Myanmar Competition Commission
A staff arranges footwears fromawholesale shop in Yangon, Myanmar, April 26, 2019. REUTERS/Ann Wang
Both local and foreign-owned companies are entitled to seek Myanmar Competition Commission’s help in settlingadispute over unfair competition, U Than Maung, vice president of the commission, said December 27.
Formed in 2018 following the enactment of Myanmar Competition Law, the commission has to date settled four disputes out of the 10 put before it. The bylaw for Myanmar Competition Law, approved in 2017, prohibits unfair competition conduct in order to fosterastrong competitive market.
“The law will treat all companies equal, whether the ownership is local or foreign,” said U Than Muang. “A foreigner is also entitled to seek protection of this law for any damage caused by unfair practices in the market, as ours isafree market. We createafair and equal playground for both local and foreign players.”
The law provides protection against practices that undermine market competition and efforts to control supply so that other companies cannot access it. While the commission has the authority to take action against unfair practices, it has had difficulties investigating matters due toalack of experts and competing demand on commission members’ time.
Illicit imports through border gates have impacted local products, and wholesale and retail distributors often raise questions and concerns over illicit trade during meetings with regulators.
The government has formed committees in states and regions to fight illegal imports, but their efforts have not eradicated the problem. In the 13 months from September 2018 to October 2019, over K15 billion worth of illegal goods were confiscated.
မြန်မာနိုင်ငံ ယှဉ်ပြိုင်မှှုကော်မရှင်ထံ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများသာမက ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံှမှှု လုပ်ငန်းများအနေဖြင့်လည်း ဈေးကွက်အတွင်း မမျှတမှှုများ ရှိလာပါက တိုင်ကြားမှှုများ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှှုကော်မရှင် ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးသန်းမောင်က ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် မီဒီယာများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ယှဉ်ပြိုင်မှှုကော်မရှင်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်အတွင်း အမှှုပေါင်း ၁၀ မှှု ခန့်ကို လက်ခံဖြေရှင်းလျက်ရှိနေရာ အမှှု ၄ မှှုမှာ ပြီးပြတ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှှု ဥပဒေ ကို ၂၀၁၅ ခုဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် ပြဌာန်းခဲ့ပြီး နည်းဥပဒေထွက် ပေါ်လာပြီးနောက် ၂၀၁၇ ခုနှစ် တွင် စတင်အာဏ အသက်ဝင်လာခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ယှဉ်ပြိုင်မှှု ကော်မရှင်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် မျှတမှှုမရှိသော ဈေးကွက်ပြိုင် ဆိုင်မှှုများ မဖြစ်စေရန်ဥပဒတွင် တားဆီးထားကြောင်း သိရသည်။
“ ဒီမြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှှုဥပဒေမှာ နိုင်ငံသား နိုင်ငံခြားသား ခွဲခြားထားတာမရှိဘူး ။ နိုင်ငံခြားသားလည်း နစ်နာမှှုရှိတယ်ဆိုရင် တိုင်လို့ရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး စနစ်က ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်တယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကိုယ့်အချင်းချင်းတင်မကဘူး နိုင်ငံတကာကလာခဲ့ရင် တို့ဆီမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာရောက် ယှဉ်ပြိုင်မှှုကို ဖွင့်ထားပေးတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုများဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းများကို ကုန်ကြမ်းများ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိမှှု မရှိစေရန် ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တရားသဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကို ပျက်ပြားစေရန် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကဖြစ်စေ အစုအဖွဲ့ကဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်လာပါက အဆိုပါဥပဒေဖြင့် အရေးယူခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ဈေးကွက်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းမှ ချူပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုလည်း အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး သံသယဖြင့် စစ်ဆေးမည်ဆိုပါက ကဏ္ဍအလိုက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ခန့်အပ်ရခြင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ အချိန်ပေးနိုင်မှှု မရှိခြင်းများကြောင့် အခက်အခဲများ ရှိနေကြောင်း ကော်မရှင်မှ သိရသည်။
ကော်မရှင်တွင် တိုင်ကြားမှှုဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ သံသယဖြင့် ကြားသိမှှုများဖြင့်ဖြစ်စေ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့် စစ်ဆေးအရေးယူခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သော်လည်း အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာဖြင့် တိုင်ကြားမှှုများ ပြုလုပ်လာပါက ပိုမိုထိရောက်လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မရှင်က ရှင်းပြထားသည်။
နယ်စပ်ဒေသများမှတဆင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှှုများပိုမိုဝင်ရောက်လာခြင်းကလည်း ပြည်တွင်း ကုန်စည်ရောင်းချမှှုအပေါ် သက်ရောက်မှှုရှိပြီး လက်လီလက်ကားကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးသူအများစုက အဆိုပါပြဿနာကို အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံတိုင်း မေးခွန်းထုတ်လေ့ရှိသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဆိုင်သည့်ဗဟိုကော်မတီအပြင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အချို့တွင် ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်သော်လည်း တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှှုများက ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ကုန်အထိ ၁၃ လတာကာလအတွင်း တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှှု ၁၀၆၅ မှှု မှ ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ၁၅ ဘီလီယံကျော်ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Previous articlePhandeeyar Invests $25,000 in Restaurant Booking App Resdi
Next articleCentral Bank to Auction Treasury Bonds